Bangladesh: Mankalaza Ny Andron’ny Tenin-dReny · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 10 Oktobra 2017 16:39 GMT
Fanamarihana: ity lahatsoratra ity dia nivoaka tamin'ny 2007
Ny 21 Febroary no Andro Iraisam-pirenena Fankalazana Ny Tenin-dreny, hetsika iray isan-taona any amin'ireo firenena mpikambana amin'ny UNESCO, mba hampiroboroboana ny fahasamihafana eo amin'ny fiteny sy ny ara-kolontsaina ary ny hamaroam-pitenenana. Ity no fankatoavana tena iraisam-pirenena ny Andron'ny Hetsika mikasika ny Fiteny izay antsoina hoe ‘Ekushey February’, izay ankalazaina any Bangladesh hatramin'ny taona 1952, rehefa novonoin'ny mpitandro filaminana Pakistaney sy ny Tafika tao Dhaka ny maromaro tamin'ireo mponina niteny ny fiteny Bangla.
Milaza amim-pireharehana i Shawon68 fa:
Ny 21 no Ekush ho an'ny Bangla, ary midika faha-21 ny hoe Ekushey. Ao Bangladesh, ‘Ekushey’ dia mitovy dika amin'ny ‘Ekushey Febroary’ ihany, andro izay ankalazan'ny Bangla ny Hetsika mikasika ny Fiteny sady fanomezam-boninahitra ho an'ireo namoy ny ainy noho ny anarany tamin'ny faha-21 Febroary 1952.
Mitanisa ireo mahery fo lavo sy ireo nandray anjara tamin'ny hetsika ho an'ny fiteny i Pinaki.
Sombiny kely tamin'ny tantara: Tamin'ny volana Aogositra 1947, noho ny fizaràna an'i India, nipoitra tao anaty sarintanin'izao tontolo izao ny firenena iray vaovao antsoina hoe Pakistana, nahitana ireo elatra roa lavidavitra (halavirana 1600 Km) any andrefana ary sarahan'i India avy aty atsinanana. Ny fototra ideolojika mikasika io trangan-javatra hafahafa io dia ny teoria kidaladala sy mamoa-dozan'ny firenena roa an'i Mohammad Ali Jinnah, izay nanao tsinontsinona ireo singa fototra amin'ny fiteny sy kolontsaina ary nanasokajy ny fivavahana ho toy ny fatotra mafy sy ampy mba hamadihana vahoaka iray ho lasa firenena iray. Ny Bangka no fitenin'ny mponina ao amin'ny elatra atsinanan'i Pakistana, ary izy ireo no betsaka indrindra. Nanan-karena tamin'ny literatiora nentindrazana efa manodidina ny arivo taona izy io. Nanana kolontsaina efa nivoatra be ihany koa ny Bengalis izay nisy niraisany kely tamin'ny kolontsain'ireo vahoaka avy amin'ny elatra andrefan'i Pakistàna. Raha tamin'ny taona 1952 ireo mpanjanaka mpitondra, liam-pahefana, be rehaka nifehy an'i Pakistana dia nanambara fa ny ‘Urdu ary ny Urdu irery ihany no tokony ho fitenim-panjakàna ao Pakistana, nanatanteraka fikomiana iray fantatra taty aoriana tamin'ny hoe Hetsiky ny Fiteny (Loharano 1, 2) ny mponina avy ao Pakistana Atsinanana.
Shaheed Minar nataon'ilay mpahay taotrano Hamidur Rahman
Mba hankalazana io hetsika io sy ireo namoy ny ainy, najoro ny Shaheed Minar, sary sokitra iray manetriketrika sy famantarana, narantiranty teo amin'ny toerana nisy ilay fandringànana. Tandindon'ny Fitiavan-tanindrazana Bangladesh ilay tsangambato. Isantaona rehefa faha-21 n'ny volana Febroary, manomboka vao mangirandratsy, olona anjatony sy an'arivony no mitanjozotra tsy mikiraro mba haneho fanajana ireo maritiora amin'ny alalan'ny fihiràna ireo hira fahatsiarovana sy fitondràna ireo girlandy eny an-tànana mankeo amin'ny Shaheed Minar. Akanjo mainty sy fotsy fotsiny ihany no tafian'ireo lehilahy sy vehivavy.
Mandefa sary sasantsasany misy ny fankalazana ny Ekushey February ao Bangladesh i Jahangir Alam.
Ny Foaraben'ny Boky Ekushey, izay nanjary ho anisany kolontsaina sy fombandrazana Bengali iray dia natao tao amin'ireo faritry ny Akademia Bangla ao an-tanànan'i Dhaka isaky ny volana Febroary nanomboka ny taona 1972, ho fankalazàna ny ‘Ekushey February’. Mandefa sary vitsivitsy mikasika io Foaran'ny Boky tamin'io taona io i Ershad.
Manodidina ny 27 isan-jaton'ireo fiteny manerana izao tontolo izao no atahorana ho levona. Milaza ny Foundation for Endangered Languages (Orina ho an'ireo Teny Tandindonin-doza) fa 83 isan-jato amin'ireo fiteny manerana izao tontolo izao no voafetra ho anà firenena tokana, mahatonga azy ireny ho marefo kokoa manoloana ny politikan'ny governemanta tokana.
Fifandraisana misy eo amin'ny tenin-dreny sy ny hamaroa-piteny no lohahevitry ny Andro Iraisam-pirenena ho an'ny Tenin-dreny tamin'ny taona 2007.
Manohana sy mamporisika ny fahasamihafan'ireo fiteny ihany koa ny Global Voices. Efa niomanany ny hanangana pejy manokana voadika avy amin'ireo tranonkala manana votoaty amin'ny Anglisy ho amin'ny fiteny Bangla, Shinoa (notsorina sy nentindrazana), Frantsay, Portiogey, Rosiana, ary Espaniola. Hanome fahafahana ireo olona tsy manoratra/miteny afa-tsy amin'ny fiteny tokana io mba ho afaka vakiana sy ho ren'ireo mpandahateny amin'ireo fiteny hafa.